nattalin: Run Command လေးတွေ
Run Command လေးတွေ
* ကွန်ပျုတာကို သုံးနေတဲ့သူ အားလုံးရဲ့ Profile တွေရှိနေတဲ့ နေရာကို ပြပေးပါတယ်။
* အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ သိမ်းထားတဲ့ နေရာပါ။
* Command shell တကယ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာ။
* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive နေရာ။
* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive လမ်းကြောင်း။
* လက်ရှိဝင်သုံးနေတဲ့သူရဲ့ Domain Controller
* ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ နေရာ
* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Directory
* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Root Directory
* %tmp% သို့မဟုတ် %temp%
* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အလုပ်လုပ်လက်စ ဖိုင်တွေရှိရာနေရာ
* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူ အမည်
* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Domain အမည်
* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူရဲ့ Profile ရှိရာနေရာ
* OS တင်ထားတဲ့ နေရာ
ကွန်ပျူတာ မှာ အသုံးပြု တဲ့ Run Command လေးတွေ……………(This is used for command in computer ) …..
NOTE: If you interest to use this command ,you must be done as like this step.First go to the ‘run’,in this box you must be written ‘cmd’.You will see command box .In this box you write this command .Only not know computer command ………………………………………….
Try it.We will get.သုံးနည်းလေးပါပထမဆုံး”run box”ကို ဖွင့် ရမှာပါ။window key နဲ့ R ကို တွဲ နှိပ် ပါ။”Run box” ကျ လာပါ မယ်။
အဲဒီ”Run box” မှာ “cmd”လို့ရိုက် ပါ။
“command box”လေးကျ လာ ပါ မယ်။
အဲဒီ “box” လေးမှာ ဒီ “command”တွေကို ရိုက် ပြီးသုံးကြည့် ပါ။သိ ပြီးသူများကို မရည်ရွယ် ပါ ဘူး..။.
18.Direct X Control Pannel (If Installed)* (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က
63.Nview Desktop Manager (If installed) (command box )မှာ ရိုက် ရမှာ က
source; Computer Journal